အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်စက်ရုံများမှ သင့်တင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းကို အာမခံရန် အဆင့်6ဆင့်
မင်္ဂလာပါ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဝတ်အစားများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အိပ်ရာများနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သယ်ဆောင်သူများအပါအဝင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ ပို့ဆောင်မှုနှင့် အကောက်ခွန်ကြေငြာချက်ကို ဂရုစိုက်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တင်ပို့သူအား သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါစို့။ထိုသို့ဆိုလျှင်၊ ဤသည်မှာ သင့်အတွက် မှန်ကန်သော ချန်နယ်ဖြစ်သည်။အစ- ငါ့နာမည် ဟီမီ။ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းတွေကို အထည်အလိပ်ပစ္စည်းတွေကနေ အချောထည်အဖြစ် ဘယ်လိုထုတ်လုပ်လဲဆိုတာ သင်တွေးဖူးပါသလား။မတူညီတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ စက်ရုံတွေရဲ့ လည်ပတ်မှု အပြည့်အစုံကို မင်းကို ငါ ပေးပါရစေ၊ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ ဆိုတာ ရှင်းပြမယ်။အဲဒါကို စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။စာကိုယ်- နမူနာများ အတည်ပြုချက်- ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် နမူနာဖြတ်စက် ဧရိယာရှိသည်။ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ နမူနာများကို ပြုလုပ်ပြီးနောက် အတည်ပြုချက်အတွက် ၎င်းတို့ကို ပေးပို့ပါသည်။များသောအားဖြင့် ၃-၅ ရက်လောက်ကြာတယ်...
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီနေရာက လူသစ်ဆိုရင် ဒါက တရုတ်ပြည်က Himi ပါ။
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီနေရာက လူသစ်ဆိုရင် ဒါက တရုတ်ပြည်က Himi ပါ။ကျွန်တော် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ပစ္စည်းတွေ တင်ပို့တဲ့ လုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်ပြီး ဒီခရီး တစ်ခုလုံးကို မှတ်တမ်းတင် မှတ်တမ်းတင်ချင်ပါတယ်။ဤ YouTube ချန်နယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် 1. အွန်လိုင်း amazon ebay စတိုးဆိုင်များကဲ့သို့ e-commerce လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်း 2. ဒေသတွင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ပစ္စည်းများ တင်သွင်းသူများနှင့် လက်ကားရောင်းချသူများ 3. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်းများ စူပါမားကက်ကွင်းဆက်၏ ဝယ်ယူမှုမန်နေဂျာ 4. .အော့ဖ်လိုင်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ပစ္စည်းများ အရောင်းဆိုင် အသေးစားကို လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းရန် ကြိုးစားလိုပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို အဘယ်ကြောင့် တိုးတက်အောင် မည်သို့ ကူညီပေးနိုင်သည်ကို မျှဝေခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ .။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စက်မှုလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများသည်လည်း သိသိသာသာ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။2023 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ထုတ်ကုန်များ စျေးကွက်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 47.28 ဘီလီယံအထိ ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည် ဤကဲ့သို့ မြင့်မားသောလမ်းကြောင်းနှင့် စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ကံကောင်း (သို့မဟုတ်) စမတ်ကျပါသည်။သင့်လုပ်ငန်းသည် သာလွန်လွန်းပါက သင့်လုပ်ငန်းသည် အမြတ်ထုတ်ပြီး ဒေသတွင်း လူဦးရေစာရင်းများကို သုတေသနပြုခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ကြီးပွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။မှန်ကန်သောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ 2020 နှင့် 2021 တွင် တက်ကြွစွာ ကြီးထွားလာနေသော ၀ယ်လိုအားကို ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးကို ပစ်ချရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကို ယူနိုင်ပြီး သင်၏အော့ဖ်လိုင်းနှင့် အွန်လိုင်းစတိုးများကို စတင်နိုင်ပါသည်။ထာ...
လူသားများသည် နို့တိုက်သတ္တဝါ၊ တွားသွားသတ္တဝါ၊ ကြက်ငှက် သို့မဟုတ် ရေနေသတ္တဝါမျိုးတို့နှင့် အမြဲတမ်း ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။သို့သော် ရေရှည် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းဖြင့် လူသားနှင့် တိရိစ္ဆာန်များသည် အချင်းချင်း မှီခိုအားထားရန် သင်ယူလာကြသည်။အမှန်မှာ၊ လူသားများသည် တိရစ္ဆာန်များကို အကူအညီပေးရုံသာမက အဖော်အဖြစ် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများအဖြစ် မှတ်ယူလာရသည့်အထိ ဖြစ်လာသည်။ကြောင် သို့မဟုတ် ခွေးကဲ့သို့သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို လူသားဆန်စွာပြုခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင်များကို ၎င်းတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို မိသားစုအဖြစ် ဆက်ဆံရန် ဦးတည်စေခဲ့သည်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ မျိုးရိုးနှင့် အသက်အရွယ်အလိုက် ၀တ်ဆင်ချင်ကြသည်။အဆိုပါအချက်များသည် လာမည့်နှစ်များတွင် စျေးကွက်တိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်လည်း မျှော်မှန်းထားပါသည်။American Pet Products ထုတ်လုပ်သူများအသင်း (APPMA) အရ US ရှိ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုသုံးစွဲရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း သိရသည်။ခန့်မှန်းချက်ကာလတစ်လျှောက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အ၀တ်အထည်စျေးကွက်ကို မြှင့်တင်ရန် နောက်ထပ်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
American Pet Products Association (APPA) ၏ State of the Industry Report အရ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လုပ်ငန်းသည် 2020 ခုနှစ်တွင် မှတ်တိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရောင်းအား US$ 103.6 ဘီလီယံအထိ စံချိန်တင်မြင့်မားခဲ့သည်။၎င်းသည် 2019 ခုနှစ် လက်လီရောင်းချမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ 97.1 ဘီလီယံမှ 6.7% တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စက်မှုလုပ်ငန်းသည် 2021 ခုနှစ်တွင် သိသိသာသာ တိုးတက်မှုကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အလျင်မြန်ဆုံး ကြီးထွားလာနေသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကုမ္ပဏီများသည် အဆိုပါလမ်းကြောင်းများကို အခွင့်ကောင်းယူနေကြသည်။1. နည်းပညာ- အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး လူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် နည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်လာရသည်။လူများကဲ့သို့ပင်၊ စမတ်ဖုန်းများသည်လည်း ဤပြောင်းလဲမှုကို အထောက်အကူ ပြုပါသည်။2. သုံးစွဲနိုင်မှု- အစုလိုက်အပြုံလိုက် လက်လီရောင်းချသူများ၊ ကုန်စုံဆိုင်များနှင့် ဒေါ်လာဈေးဆိုင်များပင်လျှင် အရည်အသွေးမြင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဝတ်အစားများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကစားစရာများနှင့် အခြားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းထည့်နေကြသည်...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ သင်၏တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အာမခံရန် အဆင့် ၆ ဆင့်။
မင်္ဂလာပါ၊ မင်းက တရုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေကို ရှာနေတယ်ဆိုပါစို့...
မင်္ဂလာပါ မိတ်​​ဆွေတို့ မိတ်​​ဆွေအသစ်​ဖြစ်​ရင်​ ဒီ Himi ပါ...
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီနေရာက လူသစ်ဆိုရင် ဒါက တရုတ်ပြည်က Himi ပါ။ငါခပြီ...